ရင်ပူ - ရင်ဘတ်အတွက်အန္တရာယ် - Reflux Disease
ရင်ပူ reflux ရောဂါ | ကျန်းမာရေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
တစ်ဦးပုံမီး spits တဲ့သူအချင်းလူသား, နှင့်ခေါင်းစဉ် "ရင်ပူ" ကိုလာမယ့်: အတော်များများရှေ့တော်၌ထိုရုပ်ပုံလွှာမြင်ကြပြီ။ ဤသည်ရင်ပူများအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ် image ကိုမီးသို့မဟုတ်မီးလျှံနှင့်အတူ၎င်း၏အမည်ကိုရှိနေသော်လည်းဘာမှရှိပါတယ်သိသာသည်။ တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲမနှစ်မြို့ဖွယ်ခံစားချက် - မယ့်အစား, ကနောက်ကွယ်မှအစာပြွန်ထဲမှာချွဲအမြှေးပါး၌ထားလေ၏။
ရင်ပူ - ရင်ဘတ်အတွက်အန္တရာယ် (reflux ရောဂါ)
လူတိုင်းနီးပါးဟာရံဖန်ရံခါတွေ့ကြုံရသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ရက်ကွာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အများဆုံးနာရီသို့မဟုတ်ပြီးနောက်တိုင်ကြားမှုများအဖြစ်, စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်လည်းမရှိ။ အကြောင်းကို 10 မှာအားလုံးစိုးရိမ်ပူပန်၏ရာခိုင်နှုန်းကို 15 ရန်, သို့သော်လည်ချောင်းအတွင်းမီးလောင်ရာရပ်လိုက်နိုင်သည်။
ရင်ပူ - Reflux Disease
ထိုသူတို့အဘို့, အချွဲအမြှေးပါးကလောင်ကျွမ်းနိုင်အောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါတယ်။ ကနေဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းဒါခေါ် reflux ရောဂါ, မည်သည့်ကိစ္စများတွင်ကုသရမည်ဖြစ်သည်။ အပျော့စားရင်ပူနီးပါးအမြဲအန္တရာယ်ကင်းပင်လျှင်သောကြောင့်: ရောဂါအဆင့်မြင့်အဆင့်ဆင့်များတွင်သင့်လျော်သည့်ကုထုံးလေးနက်ကျန်းမာရေးပြဿနာများမရှိဘဲခြိမ်းခြောက်နေကြသည် - ပင်ကင်ဆာ။
ထိုပြဿနာများ၏အမြစ်သည်အစာအိမ်ဖျော်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပရိုတိန်း cleaving အားဖြင့် "အမီလိုက်" vorzuverdauen အစားအစာတာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်။ ဒါဟာအင်ဇိုင်းတွေ၏အကူအညီ (pepsin) နှင့်အတူဤတာဝန်စုံနှင့် - ထူးဆန်းတဲ့အသံစေခြင်းငှါ - နှင့် Hydrochloric acid ကိုတစ်ဝတ်ပြု။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှင့် Hydrochloric acid ကို? ကြောင်းအန္တရာယ်ရှိသည်မဟုတ်လော မရနေသမျှကာလပတ်လုံးကပိုငျဆိုငျရှိရာအစာအိမ်ဖျော်ရည်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖြစ် - သောအစာအိမ်အတွက်။ ရှာလကာရည်ထက်အဆတရာထက်ပိုအက်ဆစ်ကြောင်း - - 1 မှ3၏အလွန်မျိုးစေ့ကြဲသော pH နေသော်လည်းအဘယ်သူမျှမပျက်စီးမှုရှိအစာခြေအရည်အနေအထား။ အစာအိမ်၏အတွင်းပိုင်းနံရံအထူးဒီဇိုင်းကဤတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာများသည်းခံ။
အဘယ်သူမျှမအက်ဆစ်အစာအိမ်၏အထက်ပိုင်းအဖွင့်မှတဆင့်ပိတ်နိုင်အောင်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦး sphincter တင်းကျပ်အောင်အစာပြွန်နှင့်အစာအိမ်အကြားလမ်းဆုံထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဒါပေမဲ့ဒီကြွက်သားရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းရင်းများ (လာမယ့်မေးခွန်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါ) မှနှောင့်အယှက်နိုင်ပါသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့အစာအိမ်ရဲ့ contents အဆိုပါအစာပြွန်ထဲသို့စီးဆင်းနှင့်ချွဲအမြှေးပါးလည်းဆိုးကျိုးဖြစ်စေသည်။ ဤသည်ရင်ပူအဖြစ်သိသာသည်။
အဆိုပါ sphincter ကိုခေါ်လည်းအစာအိမ်မှအဝင်ဝတော်မူ၏ကြောင်း "sphincter" ဟုခေါ်အမျိုးမျိုးအကြောင်းပြချက်များအတွက်အားနည်းသွားစေနိုင်သည်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ် 50 ထံမှအဘယ်ကြောင့်ရင်ပူသောအရာ, အသက်ကြီးတစ်ခုဆန်းလက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်မကြာခဏပိုပြီးတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အများအားဖြင့်ဒီအစာပြွန်အိပ်နေစဉ်အတွင်းပိုပြီးစိတ်အေးလက်အေးအစာအိမ်အကြား sphincter ဘာလို့လဲဆိုတော့ညဘက်မှာပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ လဲလျောင်းနေစဉ်အပြင်, အစာအိမ်ရဲ့ contents ၏ reflux မျက်နှာသာဖြစ်ပါတယ်။
သည်အခြားကိစ္စများတွင်တစ်ဦး diaphragmatic အူဝမ်းဗိုက်အတွင်းရှိအစာအိမ်၏နေရာပြောင်းရွှေ့ဖို့ဦးဆောင်။ အဆိုပါအစာပြွန်နောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့တင်းမာမှုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်, နှင့် sphincter မရှိတော့မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ကြီးမားတဲ့ diaphragmatic အူကျအကြောင်းအရာအတွက်တခါတရံတွင်ပင် pharynx သို့အစာအိမ်ထဲကနေစီးဆင်း။
ရင်ပူခြင်း၏ဂန္လက္ခဏာအထက်ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာနာကျင်ခြစ်ခြင်းနှင့်မီးလောင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ နာကျင်မှုဟာ sternum နောက်ကွယ်မှတက်ရာမှတစ်ခါတစ်ရံ radiates ။ မျိုသို့မဟုတ်သောက်ခံစားချက်တိုးတက်စေမထားဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒီခံစားမှုတစ်ခုမဖြစ်မနေမဟုတ်ပါဘူး။ လည်ချောင်းထဲသို့အစာအိမ်အက်ဆစ်၏ reflux ကြောင့်ထိခိုက်တချို့လူတွေကအစပိုင်းတွင်အဘယ်သူမျှမလက္ခဏာတွေပျော် - အထူးသဖြင့်လှည်ဖြစ်၏။ နောက်ပိုင်းမှာပေမယ့်အဆင်မပြေလျှင်, ရောဂါကုထုံးကြောင့်ခက်ခဲသည်အဆင့်မြင့်ဇာတ်စင်အတွက်ပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံအစာအိမ်အက်ဆစ်ဆက်စပ်ရင်ပူနှင့်အတူလူနာကိုလည်းမဆရာဝန်မရောက်စေကြောင်းရောဂါလက္ခဏာတွေကနေအစာပြွန်ထဲမှာပျော်ဝင်နိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်လူငယ်များရင်ဘတ်ထဲမှာပျံ့နာကျင်မှုအကြောင်းပိုမိုမကြာခဏညည်းညူ။ ဆရာဝန်များကနှလုံးတိုက်ခိုက်ဖယ်ထုတ်လိုက်ကြလျှင်, ထိုပြဿနာကိုမကြာခဏရင်ပူစေခြင်းငှါထွက်လှည့်။
လည်ချောင်းထဲမှာရံဖန်ရံခါခြစ်ခြင်းနှင့်မီးလောင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုအကြောင်းမရှိမရှိကြပေ။ ရှားပါးတိုင်ကြားမှုများတွင်အဘယ်သူမျှမဆရာဝန်တစ်ဦးကိုတွေ့မြင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းလွန်းကော်ဖီ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးမိုးသည်းထန်စွာ, High-အဆီအစားအစာအကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်သောက်၏။ ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာများအတွက်, အစာအိမ်ကိုပိုအက်ဆစ်ထုတ်လုပ်သည်။ လည်ချောင်းထဲမှာမနှစ်မြို့ဖွယ်အာရုံသူ့ဟာသူများသောအားဖြင့်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးမကြာခဏတိုင်တန်း join ပေမယ့် - အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ် - ခံစားနေရသူတစ်ဦးဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ရင်ပူကနေနှစ်ဦးကိုမှသုံးပတ်ကြာကနေအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက်ခံစားနေရပြီးထားပြီးသူကိုတစ်စုံတစ်ဦးကအဆိုပါအစာပြွန်၏အခြေအနေကိုစစ်ဆေးမှန်အကြံပြုပါလိမ့်မယ်။
ပထမဦးဆုံးဌာန၌လူနေမှုပုံစံစတဲ့တစ်ဦးပြန်လည်သုံးသပ်ရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ ကြောင်းခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လား? ငါအလုံအလောက်ရွှေ့? အဝလွန်နှင့် inertia ရင်ပူမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အဖြူရောင်စပျစ်ရည်, သကြားလုံးများနှင့်အဆီဖုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏စားသုံးမှုသတိပြုပါ။ သံသယရှိလျှင်, အဲဒါကိုမပါဘဲလုပ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။ အလားတူကော်ဖီ, လက်ဖက်ရည်နှင့်ကာဗွန်ဖြည့်အချိုရည်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ နီကိုတင်းအစာအိမ်အက်ဆစ် neutralizes ထားတဲ့တံတွေး၏စီးဆင်းမှုကိုပါလျော့ကျစေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု Smoking ။ အဆိုပါလူနေမှုပုံစံစတဲ့အလေ့အထညှိနေစဉ်ကကူညီပေမယ့်မကြာခဏအလုံအလောက်မရနိုင်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်အဘို့, အစာရှောင်ခြင်း-သရုပ်ဆောင်မူးယစ်ဆေးဝါးအများအပြားသည်ယခုအခါရှိပါတယ်။
(Hydrotalcite, Algeldrat, magaldrate, ဆိုဒီယမ်လူမီနီယမ်ကာဗွန်နိတ်အေးဂျင့်) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ပျော့တိုင်ကြားမှုများအတွက်ကယ်လစီယမ်နဲ့မဂ္ဂနီဆီယမ်ကာဗွန်နိတ်, ကမ်းလှမ်းရန် antacid မူးယစ်ဆေးဝါးများ။ ranitidine သို့မဟုတ် famotidine နှင့်အတူပြင်ဆင်မှုတွေအစာအိမ်အက်ဆစ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းတားစီး။ အစာအိမ်လှုပ်ရှားမှုကိုတစ်ဦးရောဂါ, အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်, Peppermint, စမုန်နက်, gentian နှင့်ခါးသော candytuft ၏ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များထုတ်ကုန်ကိုကူညီပေးပါတယ်။ ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်ဆရာဝန်များကပရိုတွန် pump inhibitors ၏အတန်းကနေမူးယစ်ဆေးသတ်မှတ်။ သူတို့ကအက်ဆစ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းထိရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဖိနှိပ်, ဒါပေမယ့်ချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ပါဘူး။
အချို့သောတက်ကြွစွာဒြပ်ပေါင်းများကိုအစာအိမ်ဝင်ပေါက်၏ sphincter အားလျော့ခြင်းနှင့်ဖြင့်အစာပြွန်သို့အစာအိမ် contents တွေကိုတစ်ပြန်လာစီးဆင်းမှုလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအထူးပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ, နှလုံးနဲ့သွေးဖိအားဆေးဝါးများပါဝင်သည်။ ဒါ့အပြင်အချို့ကယ်လစီယမ်ရုပ်သံလိုင်း blockers နှင့်စိတ်မကျဆေး Antidepressants အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။ ကြောင်းတခါတရံအသက်အန္တရာယ်လို - ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မူးယစ်ဆေးအပေါ်လူနာအကြောင်းပြချက်မပါဘဲမလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ရင်ပူခြင်းမှကြုံတွေ့နေကြရသည်, ဒါကြောင့်သင်ပထမဦးဆုံးကသူ့ဆရာဝန်စကားပြောသင့်တယ်သူမည်သူမဆို။
အဘယ်သူမျှမဆေးနှောငျ့တော်မူ၏သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှု၏အကြွင်းအကျန်သညျးမခံခဲ့ပါရင်ပူခြင်းမှတဦးတည်းယူပါလိမ့်မယ်, ဆရာဝန်များမကြာခဏခွဲစိတ်နှင့်အတူကူညီနိုင်သည်။ ထိုသို့သော်ရောက်စွက်ဖက် "fundoplication" ဟုခေါ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ခွဲစိတ်အစာအိမ်ဝင်ပေါက်၏တစ်ရှူးများထံမှဖွဲ့စည်းရန်သူတို့ကအစာအိမ်ဖို့အစာပြွန်ကနေအကူးအပြောင်းလုပ်ဖို့နေရာတစ်ခု cuff ဖြစ်ပါသည်။ အရှင် leaky sphincter ၏အကြောင်းတရားများကျဉ်းမြောင်းရလဒ်နောက်တဖန်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အများစုမှာလူနာများခွဲစိတ်မှုအပြီးလက္ခဏာ-အခမဲ့နေထိုင်ကြသည်။ အပြင်မည်သည့်ခွဲစိတ်မှု (ရောဂါကူးစက်, ဆင်းရဲသောဒဏ်ရာအနာရောဂါငြိမ်းစရာ), (တစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိဆရာဝန်ဖျော်ဖြေဖို့ပါလျှင်) အပါဝငျသေချာလိုကျလြှောကျနိုငျသောပုံမှန်ထက်ပြဿနာများမှသည်။
reflux ရောဂါရှိသူများလောက်တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုအတွက်အစာပြွန်ထဲမှာကိုတွေ့ရှိရပါသည် mucosal စေပါတယ်။ ဒါဟာဆရာဝန်များ၏စကားပြော, precancerous ဖြစ်ပါတယ် "Barrett ရဲ့ syndrome ရောဂါ။ " အများစုမှာလူနာ reflux ရောဂါသေးအလွန်နှောင်းပိုင်းတွင်သို့မဟုတ်ယခင်ကခံစားခဲ့ရတော်မမူသော, အထိခိုက်နေကြသည်။ တောင်မှဒီအဆင့်မှာဆရာဝန်တွေကောင်းစွာသူတို့ကိုပြုမူဆက်ဆံနိုင် - သည်သူ၏တိုင်ကြားချက်နှင့်အတူအချိန်အတွင်းလူနာအစီရင်ခံစာများသည်။
ဤသည်အမြဲတမ်းအမှုမဟုတျပါဘူး, ဒါကြောင့်တခါတရံတွင်စစ်မှန်သောကင်ဆာဟာ precancerous စင်ပေါ်မှာကနေဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ အများစုမှာထိုကဲ့သို့ကြီးထွားပိုင်းတွင်ဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီနေသည်။ အစောပိုင်းထောက်လှမ်းခွဲစိတ်မကြာခဏ endoscopic လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အတူကင်ဆာဆဲလ်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖန်တီးအတူ။ ဒါဟာစေ့စပ်ထားတဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပြီးနောက်အစာပြွန်ထိုကဲ့သို့သောလူနာအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အောင်မြင်သောလြှငျ, အားကြီးသောပြဿနာများရှားပါးဖြစ်ကြသည်။
ဆေးပညာအစိုးရအဖွဲ့နှင့်ဆေးဝါးကက်ဘိနက် | ကျန်းမာရေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
meteorosensitivity | ကျန်းမာရေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
သားသမီးတို့အဘို့မူလစာမျက်နှာကုစား | ကျန်းမာရေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
| အင်းဆက်ပိုးမွှားကိုက် ကျန်းမာရေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
Boreout | ကျန်းမာရေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
မူလစာမျက်နှာကုစား | ကျန်းမာရေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
သံချို့တဲ့ခြင်း | ကျန်းမာရေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
Otitis | ကနျြးမာရေးဆေးပညာ